लाखौँ रुपैयाँ डुबेपछि यस्तो उपाय निकाल्दै यि व्यक्ति..::Leading Nepal News
लाखौँ रुपैयाँ डुबेपछि यस्तो उपाय निकाल्दै यि व्यक्ति..
झापा, १९ बैशाख । आफ्नो डुबेको रकम उठाउन तपाई के गर्नुहुन्छ ? पटक पटक ताकेदा गर्नुहुन्छ, समाजका अगुवासँग सहयोग माग्नुहुन्छ ? तर, केही पार नलागेपछि झापाका यामनाथ दहालले आफ्नो डुबेको पैसा फिर्ता गराउन आमरन अनसन नै बसेको छन् । झापा गौरादह—१ का दाहालले लाखौं रकम डुब्दा पनि कहिँ कतैबाट न्याय नपाएको भन्दै बिहीबारदेखि आमरन अनसन सुरु गरेका हन् । स्थानीय सृजना घिमिरेले लेनदेनको क्रममा सापट लगेको आफ्नो ३६ लाख रुपैयाँ बर्षौँ बित्दा पनि फिर्ता नदिएपछि अनसन बसेको दाहाल बताउँछन् । गौरादह बजारमा उनी यतिवेला प्रचण्ड गर्मीमा अनसन बसिरहेका छन् । ‘गौरादहमा सबैसँग हार गुहार गरेँ, जनप्रतिनिधिसँग पनि सहयोग मागेँ, पैसा लगेको बकाइदा कागज छ, तर न्याय पाइनँ’, अनसनरत दाहालले भने ।
दाहालले बरु ज्यान जाला आफ्नो पैसा फिर्ता नभइन्जेल अनसन बस्ने बताए । आफ्नो ज्यान गए श्रीमती पनि अनसन बस्ने उनको भनाई छ । गाउँसमाजमा पटक पटक छलफल भएपनि आफुले न्याय पाउन नसकेको दाहाल दुखेसो पोख्छन् । दाहाल भन्छन्, ‘सम्पतिमा हाई हाई विपत्तिमा कोही छैन दाजु भाई भन्थे ठ्याक्कै ममा यस्तै आइलाग्यो ।’ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले छलफल गरेको तर प्रतिवेदन गुपचुप पारेको दाहालको आरोप छ । न्याय दिनुपर्ने न्यायीक समिति पनि पीडकसँग मिलेको उनको आरोप छ ।
घिमिरेले २०७३ साल चैत्र १७ देखी पटक पटक आफूसँग पैसा लगेको र छिमेकको नातामा विश्वासले ऋण पनि तिरिदिएको दाहाल बताउँछन् । तर, घिमिरेलाई आफूले सहयोग गर्दा आफै डुबेको र पैसा माग्दा थर्काउने र धम्कि दिने गरेको बताउँछन् । दाहालले सृजनालाई कारोबार गर्ने शिलशिलामा २६ लाख दिएका थिए । हाल त्यसको ब्याज सहित जोड्ने हो भने ३६ लाख पुग्ने दाहालको दावी छ । घिमिरेसँग यस विषयमा बुझ्न खोज्दा टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन । -दैनिक नेपालबाट